Mustafa Hasan oo loo sheegay Fursada ugu danbeysay ee uu heesto iyo bisha ay ku egtahay Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaMustafa Hasan oo loo sheegay Fursada ugu danbeysay ee uu heesto iyo bisha ay ku egtahay
1-da Luulyo ayaa suuragal ah in la arko dhamaadka nolosha Mustafa Hasan ee Norway. Diidmada ogolaanshiyaha joogitaankiisa sanadka 2019 ayay bilaabatay, marar badan ayaa racfaan laga qaatay waxaana lasiiyay joogitaan ku meelgaar ah ilaa uu ka dhamaysto waxbarashadiisa Dugsiga Sare xagaagan. Dacwadii u dambaysay waxay furi kartaa furaha kiiskan adag oo dhanka sharciga ah.
Sanadka ugu dambeeya dugsiga sare waa culeys ku filan dhalinyaro kasta. Barashada imtixaanada, go aan ka gaadhida xirfada aad dooranaysid..
Si kastaba ha noqotee, sanadkan, oo ah sanadkii ugu dambeeyay ee Dugsiga Sare, waxaa loo sheegay inuu dalka ka baxo ugu dambeyn 1-da Luulyo. waxana la ogaandoonaa wixii dhaca markaasi kadib.
Nolosha Mustafe Hasan waxay soo bilaabatay 2008. kadib markii isagoo 6 sano jir ah uu yimid Norway, isagoo ka yimid Jordan, hooyadiis iyo afar walaalo ah.
Qoyska ayaa markii hore la siiyay sharci deganaansho ku meel gaar ah oo ay Norway ku sii joogaan.
Sida laga soo xigtay UNE , ogolaanshahan “waxaa lagu bixiyay qaab qaldan, oo ku saleysan waraaqo been abuur ah iyo macluumaad qaldan oo ku saabsan asalka, iyo aqoonsiga.”